Ramos Oo Isku Dayaya In Uu Perez Ka Dhaadhiciyo Joojinta fikradda Uu Ku Doonayo Soo Xero Galinta Xidigan – Gool FM
(Real Madrid) 02 May 2018. Wargeyska caanka ah ee Don Balon ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos uu isku dayayo in uu ka dhaadhiciyo madaxweynaha kooxda Florentino Perez uu dib u dhigo xiisaha uu ku doonayo soo xero galinta Robert Lewandowski.
Wuxuu hadalka daafaca kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos imaanayaa, kadib kulankii ay kooxaha Rea Madrid iyo Bayern Munich ay ku wada ciyaareen lugta labaad wareega afar dhamaadka Champions League garoonka Santiago Bernabeu kaasoo kusoo idlaaday bar baro 2-2.
Don Balon ayaa wuxuu tilmaamay in Sergio Ramos uu durbaba la hadlay madaxweynaha kooxda Florentino Perez, wuxuunaa ku war galiyay in aan loo baahneen inuu sameeyo saxiixa Lewandowski xili ciyaareedka soo aadan, kadib markii uu dhowr fursadood uu ka qasaariyay kooxdiisa labadii kulan ay wada ciyaareen.
Waxaa jiray warar badan ee leysla dhax marayay maalmihii lasoo dhaafay eek u aadanaa in kooxda Real Madrid ay ku dooneyso aduun dhan 150 milyan euro in ay kala soo saxiixato Bayern Munich weeraryahankeeda Robert Lewandowski xili ciyaareedka xiga, si uu u noqdo badalka Karim Benzema.
Roma waxay Final ka Champions League Caawa ugu soo bixi kartaa oo kaliya in Jurgen Klopp uu........!!!!".